TANDREVAKA : Ahiana hiparitaka haingana amin’ny Faritra maro eto mintsika ny “coronavirus”
Mananontanona hiverina hiparitaka eto Madagasikara indray ny valanaretina “coronavirus” amin’izao fotoana izao, raha somary nangingina nandritra ny volana vitsivitsy lasa izay. 17 novembre 2021
Marihina anefa fa efa misokatra ny sisintanintsika. Raha tsiahivina, ny sabotsy 06 novambra 2021 lasa teo no efa nisy ny zotram-piaramanidina mampitohy ny firenena eoropeanina sy i Madagasikara izay mety ary koa tena ahiana indrindra hitondra tranga vaovao avy any ivelany indray.
Marihina hatrany mantsy fa mirongatra sy efa miparitaka amin’ny Firenena maro ny trangana coronavirus amin’ny endrina hafa na “variant Delta” izay mahery vaika. Noho izany indrindra dia mila mailo ny rehetra eto amintsika, ny Fitondram-panjakana mba hanamafy ireo fepetra hentitra tokony horaisina, ka tsy hahatonga amin’ny fahasarotana sy fahabetsahan’ireo olona hamoy ny ainy vokatr’ity areti-mandoza ity.
Tsy misy manao arovava intsony , malaina manao vaksiny ny ankamaroan’ny olona
Ho an’ny eto an-drenivohitra manokana raha ny zava-misy hita eny an-dalambe sy eny anivon’ny fiarahamonina dia saika tsy misy manaja intsony ny fepetra sakana hiarovantena na ny “gestes barrières” ireo mponina amin’ny ankapobeny. Mitovy tahaka izay toe-javatra izay ihany koa ny any amin’ny Faritra, raha ny loharanom-baovao voaray. Ny zava-misy momba ity trangan’aretina ity anefa dia mampihoron-koditra sy mahazo vahana amin’izao fotoana izao, ka tokony hahatonga saina ny tsirairay. Etsy an-kilany dia nanambara ihany koa ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka eto an-drenivohitra fa “tena mbola betsaka ireo olona eto Madagasikara no malaina manao vaksiny fiarovana amin’ity areti-mandoza ity ka mbola anentanan’izy ireo ny rehetra hatrany.” Ny fanajana ireo fepetra sakana sy ny fanaovam-baksiny, hoy izy ireo, no isan’ny antoka mahomby handresentsika miaraka ny valanaretina covid-19 nianjady ela, indrindra ny tranga fahasarotana amin’ny fiatrehana ny aretina.
Mafampana ny tranga tao Morondava
Nanomboka ny volana novambra 2021 ity, raha ny loharanom-baovao voaray avy any an-tampon-tanànan’i Morondava, dia fantatra fa efa nahatratra 10 mahery ireo olona voamarina fa mitondra ny aretina coronavirus ao an-toerana. Miakatra isan’andro io salan’isa io ary nidina ifotony tany an-toerana ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka nifandinika tamin’ny fanamafisana ny andraikitra sahanin’ny tsirairay. Tamin’ity herinandro ity ihany koa anefa dia niafara tamin’ny tsy maintsy fanakatonana sekoly miisa roa tao an-toerana izany. Manomboka miparitaka haingana ao an-drenivohitr’i Menabe izany ankehitriny izay voalazan’ireo mpitsabo fa nifindra tamin’ny alalan’ny fifampikasohana. Ireo mpianatra tao an-tsekoly no nahitana ny soritr’aretina betsaka indrindra rehefa natao ny fizahana. Vokany, voatery nakatona ny sekoly “Saint Paul” sy ny sekoly teknika ao Morondava, Faritra Menabe. Nohamafisina ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Nakatona mandritra ny 15 andro ireo sekoly ireo araka ny fepetra noraisin’ny manam-pahefana any an-toerana. Efa voamarin’ny talem-paritry ny fahasalamana tao Morondava hatrany moa ny fisian’ny tranga taorian’ny fitiliana natao.
Efa manaraka fitsaboana ireo marary
Manoloana ny toe-draharaha mafampana àry dia voatery naverina nosokafana ny CRCO Morondava, nidina any an-toerana rahateo koa ny Polisy avy ao amin’ny FIP eto an-drenivohitra mba hanampy ny mpitandro filaminana ao an-toerana amin’ny fiambenana sy fampirisihana ireo mponina mba hanaja ara-dalàna ireo fepetra sakana ara-pahasalamana. Hatreto aloha dia efa mandray an-tanana ny fitsaboana ireo marary vita fitiliana ireo mpitsabo rehetra ao amin’ny Faritra Menabe. Mbola ampy avokoa, hoy izy ireo, ny fanafody ampiasaina no sady tsy dia misy atahorana be loatra ny toe-pahasalaman’ireo marary.
Mila fandraisan’andraikitra hentitra
Ilaina ny fahatsapan-tenan’ny tsirairay. Iaraha-mahalala mantsy fa mbola tsy misy mahafantatra ny fotoana tena haharesena ity valanaretina ity hatrany amin’ny Firenena maro any ivelany. Mila fanaraha-maso akaiky koa ny fametrahana ireo lalàna momba ny fepetra ara-pahasalamana manerana ny Nosy manomboka izao izay tsy maintsy arahin’ny besinimaro. Manaitra ny Fitondram-panjakana handray ny andraikiny tsy ho ela loatra satria efa hita fa mitombo isa indray ireo marary, indrindra ny ao Morondava.